ဘက်ထရီနှင့်စျေးနှုန်းအတွက်ဝါကြွားသောစမတ်ဖုန်း | Gadget သတင်း
ယနေ့လက်ကိုင်ဖုန်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းအရေအတွက်သည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်နီးပါးတိုးတက်နေသည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ terminal အသစ်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်အာရုံစိုက်လေ့ရှိသည့်အချက်များမှာအဓိကအားဖြင့်စျေးနှုန်းနှင့်၎င်းတို့တွင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများမပါဘဲအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်ဘက်ထရီကောင်းသည်။ ထို့အပြင်၊ များစွာသောသင်ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေ့ကိုကျော်နိုင်ခြင်းရှိမရှိအမြဲတမ်းကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတစေမေးတတ်သည်။
ယနေ့နှင့်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် Android operating system ပါတဲ့စမတ်ဖုန်း ၅ လုံးကိုသင့်တော်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ဘက်ထရီကြီးမားစွာနဲ့ပြသတော့မှာပါ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်ကိုတစ်နေ့တာလုံးနှင့်အနည်းငယ်မျှကြာကြာခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မစတင်မီဤဆောင်းပါး၌သင်တွေ့ရမည့်စျေးနှုန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းလင်းလိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဘတ်ဂျက်အတွက်အလွန်အကျွံဖြစ်ပါကဤဆောင်းပါးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ "ယူရို ၁၀၀ တောင်မပြည့်တဲ့ ၀ ယ်နိုင်တဲ့စမတ်ဖုန်း ၇ ခု" ငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒါကမင်းကိုတကယ်ကူညီလိမ့်မယ်။
2 Meizu M2 မှတ်စု
3 ဂုဏ်အသရေ 4X
4 ASUS Zenfone မက်စ်
Xiaomi က မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းဈေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ချိန် မှစ၍ သုံးစွဲသူများသည်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများနှင့်သုံးစွဲသူများကိုမိုဘိုင်းပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းခြင်း၊ ဤဥပမာ၏ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Xiaomi Redmi Note 4G ထိုစုစုပေါင်းအာမခံနှင့်မကျေနပ်သူမည်သူမဆိုကိုချန်ထားမည်မဟုတ်ပါ။
၅.၅ IPS မျက်နှာပြင် (5,5 x 1280 pixels)
ပရိုဆက်ဆာ: Qualcomm Snapdragon 400 1.6GHz နှုန်း (MSM8928)
အနောက်ဘက်တွင် LED Flash၊f/ 13 နှင့် 2.2p ဖမ်းယူနိုင်သော 1080MP ကင်မရာ
သိုလှောင်မှုပမာဏ 8 GB သိုလှောင်နိုင်သည့် micro SD card ကို 64GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်
4G LTE (TD-LTE နှင့် FDD-LTE ဗားရှင်း)၊ WiFi 802.11b/ g / n, Bluetooth 4.0 နှင့် GPS
MIUI v4.2 စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android5operating system
၎င်း၏ဘက်ထရီသည်သင်အားသာချက်တစ်ခုအားစိတ်ကူးကြည့်ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့၎င်းသည် "တစ်ခုတည်း" သာ 3.100 mAh သို့ရောက်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ထက်ပိုမိုပေးလိမ့်မည်။ သောနေ့ကတဆင့်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏ဤဆိပ်ကမ်း၏အခြားအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ယူရို ၁၃၉ ဖြင့်သာဝယ်နိုင်သည်။
Xiaomi Redmi Note 4G ကို Amazon မှ ၀ ယ်ယူနိုင်သည် ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။.
Meizu M2 မှတ်စု
El Meizu M2 မှတ်စု ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြသခြင်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူရို ၂၀၀ အောက်သာကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များထက် ပို၍ သပ်ရပ်။ ပျော်စရာကောင်းသောဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြင့်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုကိုရရှိနိုင်သည်။ ၏သင်တန်းကလည်းရှိပါတယ် ၃၁၀၀ mAh ၏ရှည်လျားသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအာမခံချက်မရှိသောဘက်ထရီတစ်ခုဖြစ်သည်.
၎င်းသည် Meizu M2 Note ၏အဓိကသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
၅.၅ လက်မ IPS မျက်နှာပြင် 5,5 မှ pixel resolution ဖြင့် 1080
ပရိုဆက်ဆာ: Mediatek MT6753 octa-core 1,3 Ghz ချစ်ပ်
ကင်မရာများ - ၁၃ megapixel အဓိကကင်မရာ။ F / 13 ကို aperture ။ ရှေ့ဖက် 2.2 megapixel,f/5aperture ။
Samsung CMOS အာရုံခံကိရိယာ။
16032 GB သိုလှောင်မှုပမာဏသိုလှောင်နိုင်သည့် microSD ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်
ဘက်ထရီ: 3.100 mAh
အခြားဒေတာများ - Dual SIM
သင် Meizu M2 Note ကို Amazon မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
Huawei လက်အောက်ခံ Honor အသုံးပြုသူများစွာကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်ခဲ့သည် စျေးနှုန်းနိမ့်ပေမယ့်ပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းညွှန်ပြသင့်ကြောင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူစမတ်ဖုန်း.
Honor 4X သည်စွမ်းအားကောင်းသော phablet ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Honor6သို့မဟုတ် Honor6Plus တို့၏ဒီဇိုင်းစံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း၊ ၎င်းသည်မျက်နှာပြင်ကြီးများနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသည့် terminal ကိုရှာဖွေသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုံးဝပြproblemနာမရှိဘဲတစ်နေ့တာ၏အဆုံးကိုရောက်ရှိဖို့။
ဤရွေ့ကား Honor 4X ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များပါ၏
5,5 x 1280 pixel resolution ရှိတဲ့ ၅.၅ လက်မ IPS မျက်နှာပြင်
ပရိုဆက်ဆာ: Kirin 620 octa core 1,2 Ghz Cortex A53 နှင့် 64-bit architecture
နောက်ဖက်ကင်မရာ 13MP နှင့်ရှေ့ကင်မရာ 5MP
8GB သိုလှောင်မှုပမာဏသိုလှောင်မှုပမာဏကို microSD ဖြင့်ချဲ့နိုင်သည်
WiFi 802.11 ခ / g / n
Dual SIM နှင့် 4G
EMUI 4.4 စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android 3.0 operating system
အမြင်ထဲမှာကြောင့်ရှိနေဆဲဖြစ်သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ် terminal ထက်ပိုများတယ်။ မည်သည့် Honor စမတ်ဖုန်းတွင်မဆိုဈေးနှုန်းချိုသာပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောကြောင့်မည်သည့်စမတ်ဖုန်းကိုမဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
Amazon မှတစ်ဆင့် Honor 4X ကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည် ဒီမှာ.
ASUS Zenfone မက်စ်
လူတိုင်းသည်အိပ်မက်မက်ပြီးအားသွင်းစရာမလိုသောကြီးမားသည့်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုရရှိရန်အိပ်မက်မက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအိပ်မက်သည်ယခုတွင်သူနှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည် ASUS Zenfone မက်စ် ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ် နောက်ထပ်ဘာမျှမရှိသည့်ဘက္ထရီနှင့် 5.000 mAh ထက်မနည်းပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဟူသောတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းများကိုမြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ၎င်းသည်အလွန်ကြီးမားလိမ့်မည်။ သို့သော်အောက်တိုဘာလတွင်ရောင်းချတော့မည်ဆိုပါက၎င်းတို့အားသင့်အား၎င်းတို့ထံကမ်းလှမ်းရန်နှင့်၎င်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည်။ ပါဝါဘဏ်နှင့်အတူဤစမတ်ဖုန်းကိုဝယ်ယူထိုက်တန်ပါတယ်။
၎င်းသည် ASUS Zenfone Max အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သောအဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
Gorilla Glass 5.5 ကာကွယ်မှုဖြင့် ၅.၅ လက်မမျက်နှာပြင်
ပရိုဆက်ဆာ: 410 GHz Quad Core Snapdragon 1,2
သိုလှောင်မှုသိုလှောင်မှု 8 သို့မဟုတ် 16 GB သည် microSD ကဒ်များဖြင့် 128 GB အထိချဲ့ထွင်နိုင်သည်
13 megapixel ကင်မရာသည်f/ 2.0၊ Real Tone flash နှင့် Auto Focus laser တို့ပါဝင်သည်
၅ / megapixel ရှေ့ကင်မရာf/5နှင့် ၈၅ ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူးပါရှိသည်
အခြားသူများမှာ - 4G LTE / 3G HSPA +၊ Wi-Fi 802.11b/ g / n, Bluetooth 4.0၊ GPS
Zen UI 5.0 ဖြင့် Android 2.0 Lollipop operating system
ယခုအချိန်တွင်၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုမသိရှိရသေးသော်လည်းစျေးကွက်အပေါ်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားမှုများဖြစ်ပေါ်ရန်အလွန်မြင့်မားလွန်းသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ထို့အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းပါသည့် terminal ၏ premium version လည်းရှိမည်။ ၎င်းသည်အခြေခံအကျဆုံး version ထက်စျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။ အောက်တိုဘာလ၌ဤ ASUS ကိုရောင်းလိုက်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သံသယအားလုံးကိုရှင်းလင်းနိုင်ပြီးအသေးစိတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei Ascend G7 ကိုဆန်းစစ်ပြီးဖြစ်သည် Que အရာများစွာကိုကျွန်ုပ်တို့အံ့သြဝမ်းသာစွာဖြင့်တွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်း၎င်းအား၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည် ကမ်းလှမ်းသည် ၄ င်း၏စျေးနှုန်းသည်ဤ terminal ၏အားသာချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်အချိန်အတော်ကြာရှိနေသော်လည်းကောင်းမွန်သောရောင်းအားကိန်းဂဏန်းများဆက်လက်ရှိနေသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များအားလုံးသည် Huawei Ascend G7 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။
အရွယ်အစား - ၁၅၃.၅ x ၇၇.၃ x ၇.၆ မီလီမီတာ
ပရိုဆက်ဆာ: 53GHz အမြန်နှုန်းဖြင့် Quad Core ARM Cortex A1.2
အနောက်ဘက်တွင် 13MP F2.0 ကင်မရာ / ရှေ့ဖက် 5MP
4G LTE အထောက်အပံ့
Android 4.4 KitKat + Emotion UI လည်ပတ်မှုစနစ်
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်စျေးကွက်ထဲမှာအချိန်အတော်ကြာကတည်းကရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့်ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့အသစ်အဆန်းအချို့ကိုတော့မလျှော့ချနိုင်ပါဘူး။ စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဈေးနှုန်းထက်ပိုမို ၀ ယ်နိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်ပါသည်.
နောက်တစ်ခါပြောရမယ်ဆိုရင် Huawei မှာစျေးကွက်ထဲမှာမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ အများစုကစျေးနှုန်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုလက္ခဏာတွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်။ အကယ်၍ ဤ Huawei Ascend G7 သည်သင့်အားလုံး ၀ မယုံကြည်လျှင်တရုတ်ထုတ်လုပ်သူမှအခြား terminal တစ်ခုကသင့်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်။
သင်သည် Huawei Ascend G7 ကို Amazon မှဝယ်ယူနိုင်သည် ဒီမှာ.
ဤရွေ့ကားအရေးကြီးဆုံးဝုဏ်အတွင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်စျေးနှုန်းခဲ့ကြသောဤစာရင်းအတွက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောစမတ်ဖုန်း ၅ လုံးဖြစ်သည်။ သူတို့နှင့်တွေ့ဆုံသောအခြားဆိပ်ကမ်းများစွာရှိသည်မှာသေချာသည်၊ သို့သော်လူတိုင်းအတွက်နေရာမရှိ၊ စာရင်းကိုအဆုံးမဲ့ဖြစ်စေလိုသည်မဟုတ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပေးအပ်ထားသောစမတ်ဖုန်းအများစုကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာနှင့်သင်အထက်တွင်စျေးကွက်တွင်သင်သိသောအခြားရွေးချယ်စရာများကိုပြောပြရန်သင့်အားစဉ်းစားရန်အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံလိုပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » ဘက်ထရီနှင့်စျေးနှုန်းကြွားဝါသောအလယ်အလတ်အကွာအဝေးစမတ်ဖုန်း 5
လျှောက်လွှာ ၇ ခုသည် Instagram တွင်အများဆုံးရရှိရန်ဖြစ်သည်